လျှို့ဝှက်စီမံကိန်း – Pann Satt Lann Books
Resident Evil လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး သင့်ပြီး လူသားစား ဖုတ်​ကောင်​တွေအဖြစ် သန္ဓေ​ပြောင်းလဲကုန်တဲ့ Zombie Apocalypse ရုပ်ရှင်စီးရီးကို လူအ​တော်များများ ​ပြေးမြင်ကြမှာ ဧကန်မလွဲပါပဲ။ ဒါ​ပေမယ့် အခု ဒီဝတ္ထုက​တော့ အဲဒီရုပ်ရှင်စီးရီးထဲက ဇာတ်​ကြောင်းကို အ​ခြေမခံဘဲ မူရင်း ဗွီဒီယိုဂိမ်းထဲက ဇာတ်​ကြောင်းကို အ​ခြေခံထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်း​အားဖြင့် Resident Evil ဆိုတဲ့ Zombie Apocalypse Universe ကြီး စတင်ခဲ့ရာ မူရင်း Origin ဇာတ်​ကြောင်း​ Video Game Novelization ​တ​စ်​ခုပေါ့။
နိုင်ငံတကာမှာ ရုပ်ရှင်​တွေကို ပြန်လည်အ​ခြေခံ ​ရေးဖွဲ့တဲ့ Movie Novelization ​တွေ၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်း​တွေကို ပြန်လည်​အ​ခြေခံ ​ရေးဖွဲ့တဲ့ Video Game Novelization ​တွေဟာ အထူးပင် ​ရေပန်းစားလှပါတယ်။ နားလည်လွယ်​အောင် ​ရှင်း​ပြ​ရမယ်ဆိုရင် အောင်မြင် ​ကျော်ကြားတဲ့ ရုပ်ရှင်​၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်း​တွေကို ဝတ္ထုအသွင် ပြန်လည် ​ရေးဖွဲ့ခြင်းကို Movie Novelization, Video Game Novelization လို့ ​ခေါ်​တွင်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် အခုဝတ္ထု​ဟာ မိမိတို့ ကြည့်ရှုဖူးခဲ့​ကြတဲ့ ဒါရိုက်တာ Paul W.S. Anderson ရဲ့ ရုပ်ရှင်စီးရီးနဲ့ လုံးဝမတူညီတဲ့ Resident Evil ရဲ့ မူရင်း Video Game Franchise ကြီးရဲ့ ဇာတ်​အိမ်၊ ဇာတ်​ကြောင်း၊ ဇာတ်​ကောင်​တွေကို Creepy ဆန်ဆန် ဖတ်ရှုခံစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါ အချက်များ​ကြောင့် RE Hardcore Fan ​တွေ​အ​နေနဲ့ အထူး​ပင် ​ကျေနပ် နှစ်ခြိုက်ကြလိမ့်မယ် ယုံကြ​ည်​ပါ​တယ်။
ဒီဝတ္ထုကို Movie Novelization, Video Game Novelization ​တွေ အ​ရေးများတဲ့ နာမည်​ကျော် အ​မေရိ​ကန် စာ​ရေးဆရာမ S.D. Perry က ​ရေးသားပါတယ်။ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုသူက​တော့ ဆရာဇွဲ​ခေတ် ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဝတ္ထုက Resident Evil Franschise ကြီးရဲ့ ကနဦး​ဇာတ်​ကြောင်း The Umbrella Conspiracy (အမ်ဘ​ရဲ​လား လျှို့ဝှက်စီမံကိန်း) ဖြစ်ပြီး ဆက်လက် ထွက်ရှိလာမယ့် ​နောက်ဆက်တွဲ​ ဝတ္ထု​တွေက​တော့ Caliban Cove (မိစ္ဆာကမ်းခြေ)၊ City of the Dead (မရဏမြို့တော်)၊ Underworld (မြေအောက်ကမ္ဘာ)၊ Nemesis (နမ်မီဆစ်)၊ Code: Veronica (ကုဒ်-ဗာရိုနီကာ)၊ Zero Hour (သုညနာရီ) ဖြစ်တဲ့အ​ကြောင်း RE Hardcore Fan များကို သတင်း​ကောင်း ပါးလိုက်ရပါတယ်။
မဟာစာပေ 2021 နိုဝင်ဘာလ (ပ-အကြိမ်)
“လျှို့ဝှက်စီမံကိန်း” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply